Ukukhulisa amazambane eningizimu yeBrazil. Okuhlangenwe Nakho Umlimi - Potato System Magazine
Amakhasi ethu ezinkundla zokuxhumana
I-German Seed Alliance: Amasiko ekhwalithi aseJalimane wabalimi bamazambane baseRussia
Iqembu lezinkampani "Inkazimulo kumazambane"
I-LLC "Agrofirma KRiMM"
main Indaba Yempumelelo
Ukukhulisa amazambane eningizimu yeBrazil. Isipiliyoni somlimi
в Indaba Yempumelelo
Igama lami ngingu-Adriel Setlik kanti amazambane yisitshalo esikhulu umndeni wami osuhlale ukhula iminyaka engaphezu kwengu-60. Ngeshwa, ngisho namapulazi anolwazi oluningi kwezolimo awavikelekile ekulahlekelweni kwenzuzo. Ukuqiniseka ngokuzayo, ngesizini edlule sisayine isivumelwano sokuhlinzeka ngemikhiqizo ngesitshalo esisebenzayo. Ngakho-ke, sikwazile ukulungisa intengo ethengisayo yomkhiqizo wethu wokugcina.
Ipulazi lethu lisendaweni yaseRio Grande do Sul, ehlaswe yisomiso esinamandla ngesizini edlule, okuholele ekwehlekeni okukhulu kwezithelo. Sekuphele iminyaka engama-20 sitshala amazambane kuleli lizwe, futhi singasho ukuthi lesi kube yisomiso esibi kakhulu esike sayibona esifundeni.
Ngokomlando, isifunda sethu sinesibalo esihle semvula unyaka wonke, kodwa sifuna ukuqinisekiswa ukuthi sithole imiphumela ehle ngesizini entsha. Ngale njongo, siqashe iziza ngamanzi okunisela. Silindele iimvula zihlale zikhona njengakuqala, kepha noma ngabe isimo sezulu singeyona into ebesingathanda ngayo, sisazokwazi ukukhiqiza amazambane amaningi.
Ukubambisana nomkhakha wokulungisa kwaqala ngonyaka wezimo zesimo sezulu esibi, kepha sisashukunyisiwe futhi sikholwa ukuthi ukubambisana okunjalo kuzosiza inkampani yethu ukuthi isebenze futhi ikhiqize inzuzo.
Sekukonke, umsebenzi wezinkontileka nokulungela ukuguquka kwesimo sezulu kuyindlela yethu yokubheka esikhathini esizayo ukuqinisekisa izinsuku ezingcono zomndeni wethu nezolimo.
Umbhalo: Vinicius Silva
Tags: Brazilamazambane akhula
USergey Lisovsky: "I-YUGAGRO" ikhombisa ukuthi uhlelo lukahulumeni lokuqalwa kwesakhiwo sezolimo lusetshenziswa kanjani "
Izinhlobo ezaziwa kakhulu zamazambane: "izinkanyezi" zesizini 2020
Ukunakekelwa kwamazambane ngenkathi yezimbali nangemva kwayo
Ukukhiqizwa Kwamazambane eGibhithe: Izidingo Zangaphandle
Ukuhluma kobungcweti kwesitoko sokutshala amazambane
I-webinar yesine ye-Potato Union "INZIMA EKUFUNDENI - KULULA ENSIMINI"
Amazambane akhula esifundeni saseNovgorod
Amazambane akhula esifundeni saseKursk
Kukhula amazambane esifundeni saseRyazan
Ungayikhulisa kanjani i-hogweed foci ngotshani bokusanhlamvu
Vumela ubuchwepheshe bemephu. Abalimi bezitshalo zokusanhlamvu nezimpande
Izinhlobo eziyisithupha zamazambane wembewu ezinikezwe zisuka eBelarus zaya ePrimorye
Umagazini i- "Potato System" 12+
© 2021 Magazine "Uhlelo Lwamazambane"
Lapho usebenzisa imininingwane kwi-Intanethi nakuzincwadi eziphrintiwe (kufaka phakathi ukucaphuna), isixhumanisi esiya kusayithi likamagazini i- "Potato System" siyadingeka.
Umbono wokuhlela awuhambisani ngaso sonke isikhathi nombono wabalobi.
Obhekele okuqukethwe yizikhangiso ngabakhangisi.